Laascaanood: Booliska iyo dablay maanta ku dagaalamay.
Wararka ka imaanaya Magalada Laascaanuud ee Gobolka Sool ayaa sheegaya in maanta halkaasi is rasaasayn ku dhexmartay Ciidanka Amaanka Magaalada iyo dablay ka caraysan duminta guriyo wasaarada Howlaha Guud ee Maamulka Somaliland amartay in la dumiyo.
Wasarada hawlaha guud ee Maamulka Somaliland faraceeda Magalada Laascanod aya saka bilowday duminta iyo bur burinta guryo lagu shegay in ay ku yaalen mel wado ah o larabay in wado laga dhiso sida dadka deegaanku Xaqiijinayaan.
Balse daqiiqado ka dib waxa bilaawday gacan kahadal iyo israsas udhaxysa ciidamada Booliska Somaliland ee ku sugnaa goobta laga duminaayay guryaha sharci darada ahaa iyo dablay la sheegay in ay lahaayeen guryaha laduminayo waxaana gudaha Magaalada la maqlay rasaas Xoogan oo ay is dhaafsanayaan labada dhinac.
Waxaa jira Khasaaro soo kala gaaray labada dhinac walow aan la Xaqiijin Khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahey, walina is hor fadhiyaan Maleeshiyaadkii dagaalamay.
Waxaa istaagay howlaha burburinta Guryaha oo ay waday wasaarada Guryaynta iyo Howlaha Guud ee Maamulka Somaliland oo ka socotau degmada Laascaanood ee Gobolka Sool.
Ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan Booliska Somaliland ayaa la geeyay goobaha ay wasaarada Howlaha Guud ee Somaliland amartay in la burburiyo Guryaha ku yaala sida Mustaqbal u sheegeen dadka deegaanka.